नेपालको अबस्था पनि भारतको जस्तै हुदै, टेकु अस्पताल भरिसक्यो थप बि’रामी राख्ने ठाउ छैन ! – Ramailo Sandesh
यो समय पक्कै बितेर जानेछ, तर ख्याल गरौं है– अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्यन्तै जो’खिम अवस्थामा छौं। यो जोखिम सहजै ट’र्ने स्थिति छैन, जबसम्म तपाईं–हामी सचेत र च’नाखो हुँदैनौं।
मोबाइलको घण्टी जति बज्छ, उति तनाव थपिन्छ। अधिकांश फोन, आ’ईसीयू र भे’न्टिलेटरको खोजीमा आउँछन्। तर, टेकु अस्पताल भरिसक्यो। थप बि’रामी राख्ने सम्भावना न्यून छ। अब, वार्डबाट आ’ईसीयूमा बि’रामी सार्ने स्थिति छैन। रिफर गर्न अन्य अस्पतालमा खोज्दा बेड भेटिँदैन।
विगत एक वर्षअघिदेखि को’भिडका बि’रामी हेर्दा यति जटिल अवस्था भो’ग्नुपरेन। अहिले, बि’रामीमा सुधार हुने अनुपात पनि घट्दो छ। हामी एकदमै ड’रलाग्दो अवस्थाको सं’घारमा छौं। घरिघरि त लाग्छ, हामी उपचारमा ख’टेकै मान्छे ढल्यौं भने के होला अवस्था?
जताजतै खुला छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले बढ्दो छ। यो संक्रमणको फै’लावट कहाँसम्म पुग्छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिले बच्चा र युवा पनि उत्तिकै जो’खिममा छन्, वृद्धवृद्धा र दी’र्घरो’गी त उसै पनि जो’खिममै थिए।
हामीले कहिल्यै चे’तेनौं। म’हामारीलाई साह्रै हलुका रूपमा लिनाले अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो। यसबीचमा हामीले मा’पदण्डको पालना गर्नै बि’र्सियौं। कोरोनाको पहिलो लहर शि’थिल हुँदै गर्दा हामी फु’क्काफाल भयौं। हामी सु’स्तायौं, तर कोरोना भाइरस अझ सं’क्रामक भएर आयो।
संक्रमणको फै’लावट यही गतिमा अघि बढे, बि’रामीले उ’पचार नै नपाउने स्थिति आउन सक्छ, स्वास्थ्य सेवा डा’माडोल हुन सक्छ। अस्पतालमा बे’ड नपाउने समस्या त छँदैछ, कुन उपचारले बि’रामी नि’को हुनेछन् भन्ने अ’न्योल पनि उस्तै छ। कोरोना बाहेकका अन्य बि’रामीको बि’चल्ली हुने अवस्था छ।
को’भिडको अहिलेको लहरमा संक्रमितहरू सिकिस्त हुने अनुपात पहिलो लहरको तु’लनामा बढी छ। एक्कासि बढेको सि’किस्त बि’रामीको चाप कसरी थेग्ने भन्ने अ’न्योल छ। पहिलो लहरमा प्र’भावकारी भएका औषधि र विधि अहिले क’मजोर भएका छन् ।तत्काल कोरोना भाइरसको संक्रमणको फै’लावट रो’क्नु जरुरी छ।
‘चे’न ब्रे’क’ नगरी हामीले स’म्हालिने मौका पाउने छैनौं। अहिले आईसीयूमा जति सि’किस्त बि’रामी हुनुहुन्छ, त्यसले समुदायमा कति संक्रमित नि’र्धक्क घु’मिरहनुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कृपया, अब अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्किएर आफूलाई र अरूलाई जो’खिममा नपारौं।
सुरक्षाका सबै मा’पदण्ड अपनाऔं। अहिले कसैलाई दो’ष दिएर केही हुनेवाला छैन। सकेसम्म सु’रक्षित रहने कोसिस गरौं। यो ड’रलाग्दो समय बि’तेपछि खोजी गरौंला, हामी कहाँ–कहाँ चु’क्यौं? (डाक्टर बास्तोला टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालमा कार्यरत छन्।)